Ntughari ohuru nke ihe eji edozi ihe oyiyi nke Darktable 2.6.0 biara | Site na Linux
Versiondị ọhụrụ nke Darktable 2.6.0 nhazi ihe oyiyi na-abata
Ọchịchịrị bụ sọftụwia na - edezi onyonyo ọkachamara na nhazi nke foto "raw"ntụgharị data sitere na igwefoto igwefoto.
Ọchịchịrị na-akwado na-arụ ọrụ na ihe oyiyi RAW ma na-enye nnukwu nhọrọ nke modulu iji rụọ ọrụ dị iche iche na nhazi foto.
1 Ntughari ohuru nke Darktable 2.6.0
1.1 Ozi kachasị na Darktable 2.6.0
2 Etu esi etinye ụdị ọhụụ nke Darktable?
Ntughari ohuru nke Darktable 2.6.0
Mgbe otu afọ nke mmepe, Darktable 2.6 foto edezi usoro dị njikere, nke na-eje ozi dị ka ihe nnwere onwe n'efu na ngwaahịa dịka Adobe Lightroom na Apple Aperture.
Dị ka ọdịnala si kwuo, wepụtara mbipụta ọhụụ nke Darktable 2.6.0 maka ekeresimesi 2018 Ọ bụ afọ nke mmegharị maka ngwa nke na-abịa na mwepụta ọhụụ a nwere ọtụtụ atụmatụ dị mkpa nke ndị nyere aka na nso nso a.
Ozi kachasị na Darktable 2.6.0
Na ọhụụ ọhụrụ nke ngwa a anyị nwere ike ịchọta modul edezi ọhụụ, dịka usoro modul smudge, jiri smart oyiri (mgbazi ngwá ọrụ) na ikike ime ihe ọ bụla larịị nke zuru ezu n'otu n'otu.
Ọzọkwa agbakwunye usoro ihe nkiri, nke nwere ike ijikwa ọtụtụ akụkụ nke ihe onyonyo na otu modul, mgbe ị na-echekwa agba.
Site na nhapụ a ndị mmepe ahụ mezigharịrị modulu nguzozi agba, nke enwere ike ịhụ dị ka ụdị agba dị iche iche karịa ogo ogo.
Na-eweta nhọrọ nhọrọ agba ọhụrụ, usoro a na-enye gị ohere ịme ọtụtụ mgbanwe na akpaghị aka.
Ikike iji duzie nsogbu nke nkpuchi ngwakọta, ịhọrọ ihe na obere mbọ.
Ka ọ dị na mbụ, a gbanwere usoro nchekwa data site na isi ntọhapụ a, you gaghị enwe ike reboot gara aga nsụgharị nke foto gị mgbe launching Darktable 2.6. Cheta ime nkwado ndabere na nchekwa data gị (~ / .config / darktable / directory) tupu nweta nkwalite.
Agbanyeghị na Darktable bụ isi na-elekwasị anya na mmepe RAW, mbipụta ndị a ewepụtara n’oge na-adịbeghị anya webatara atụmatụ ndị edebere maka ndị ndezi edetu pixels, dị ka GIMP, dị ka modul liquefaction.
A na - eme usoro ọzọ dị mkpa na ntụzịaka a na modul ọhụrụ a, nke na - anọchite anya modul mgbazigharị ntụpọ, na nkewa nkewa maka ịmezigharị ọma.
Etu esi etinye ụdị ọhụụ nke Darktable?
Maka ndị na-eji Fedora ma ọ bụ nkesa sitere na ya, iwu ha kwesịrị iji bụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Versiondị ọhụrụ nke Darktable 2.6.0 nhazi ihe oyiyi na-abata
You maara ihe ọ bụla gbasara mgbe ụdị nke Darktable na Spanish ga-apụta?
Zaghachi Jose Luis Mateo
Emepụtara LibreELEC 9.0 Beta mbipute n'oge na-adịbeghị anya
Tụgharịa kọmputa gị ma ọ bụ Raspberry pi ka ọ bụrụ ihe njikwa ochie na Lakka